မော်ဒိုက် သွားတုန်းက ပိုင်တံခွန် နဲ့ရေကူးကန်ထဲမှာမနက်စာအတူစားခဲ့ကြတဲ့ ပုံလေးတွေ ကိုထုတ်ပြလိုက်တဲ့ ဆွိဝတ်ရည်သောင်း – Cele Oscar
သီချင်းတွေ ကို သီဆိုရင်းနဲ့ ဂီတလောက မှာ ရပ်တည်နေသူကတော့ အဆိုတော်မလေး ဆွိဝတ်ရည်သောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး အေးဝတ်ရည်သောင်း ရဲ့ ညီမချောလေးပဲ ဖြစ်ပြီး အစ်မလို သရုပ်ဆောင်ဘက် ကို ဝါသနာမပါဘဲ သီချင်းဆိုရတာကိုပဲ နှစ်သက် သူလေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့အသံအေးအေးလေးကလည်း ယောကျာ်းလေး ပရိသတ်တွေကိုသာမကဘဲ မိန်းကလေးပရိသတ်တွေကိုပါ ဆွဲဆောင်ထားနိုင်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မကြာသေးခင် မိနစ်ပိုင်းလောက်က ဆွိဝတ်ရည် သောင်းရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်တွင် မိန်းကလေးပရိသတ်တွေ မနာလိုစေမယ့် ပုံလေးတွေ တင်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ မော်ဒိုက် သွားတုန်းက ပိုင်တံခွန်နဲ့ရေကူးကန်ထဲမှာမနက်စာ အတူစားခဲ့ကြတဲ့ ပုံလေးတွေကိုထုတ်ပြလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကလည်း ” ကဲရော့! ကိုကြီးတံခွန်နဲ့ maldives ခရီးစဉ်အမှတ်တရ(အ​ရှေ့တောင်အာရှက မမများမနာလိုဖြစ်ကြကုန် 😜 😜😜 ) ” ဆိုပြီး ရေးပြီး ပုံလေးတွေ တင်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပုံလေးတွေကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်က အေးဝတ်ရည်သောင်း ၊ အိမ့်ချစ် ၊ ပိုင်တံခွန်၊ ကျော်ထက်ဇော်၊ ပိုင်ဖြိုးသု၊ အောင်မင်းခန့် အစရှိတဲ့အနုပညာရှင်ညီအစ်ကိုမောင်နှများနဲ့ မော်ဒိုက်ကမ်းခြေ ကို သွားရောက်လည်ခဲ့စဉ်က ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ အမှတ်တရပုံရိပ် လေးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမတင်ထားတဲ့ ပုံအောက်တွင်လည်း မိန်းကလေးပရိသတ်တွေက ဆွိလေးကို စနောက် နေကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေလည်း ကြည့်လို့ရအောင် ပိုင်တံခွန်နဲ့ ဆွိဝတ်ရည်သောင်းတို့ရဲ့ ပုံလေးတွေကို တစ်ဆင့် ပြန်လည် ကူးယူတင်ဆက် ပေးလိုက်ရပါတယ်နော်။
သီခငျြးတှေ ကို သီဆိုရငျးနဲ့ ဂီတလောက မှာ ရပျတညျနသေူကတော့ အဆိုတျောမလေး ဆှိဝတျရညျသောငျးပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူမဟာ သရုပျဆောငျ မငျးသမီးခြောလေး အေးဝတျရညျသောငျး ရဲ့ ညီမခြောလေးပဲ ဖွဈပွီး အဈမလို သရုပျဆောငျဘကျ ကို ဝါသနာမပါဘဲ သီခငျြးဆိုရတာကိုပဲ နှဈသကျ သူလေးလညျး ဖွဈပါတယျ။ သူမရဲ့အသံအေးအေးလေးကလညျး ယောကျြားလေး ပရိသတျတှကေိုသာမကဘဲ မိနျးကလေးပရိသတျတှကေိုပါ ဆှဲဆောငျထားနိုငျတာလညျး ဖွဈပါတယျ။
မကွာသေးခငျ မိနဈပိုငျးလောကျက ဆှိဝတျရညျ သောငျးရဲ့ လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာထကျတှငျ မိနျးကလေးပရိသတျတှေ မနာလိုစမေယျ့ ပုံလေးတှေ တငျထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒါကတော့ မျောဒိုကျ သှားတုနျးက ပိုငျတံခှနျနဲ့ရကေူးကနျထဲမှာမနကျစာ အတူစားခဲ့ကွတဲ့ ပုံလေးတှကေိုထုတျပွလိုကျတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူမကလညျး ” ကဲရော့! ကိုကွီးတံခှနျနဲ့ maldives ခရီးစဉျအမှတျတရ(အ​ရှတေ့ောငျအာရှက မမမြားမနာလိုဖွဈကွကုနျ 😜 😜😜 ) ” ဆိုပွီး ရေးပွီး ပုံလေးတှေ တငျထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒီပုံလေးတှကေတော့ လှနျခဲ့တဲ့ တဈနှဈက အေးဝတျရညျသောငျး ၊ အိမျ့ခဈြ ၊ ပိုငျတံခှနျ၊ ကြျောထကျဇျော၊ ပိုငျဖွိုးသု၊ အောငျမငျးခနျ့ အစရှိတဲ့အနုပညာရှငျညီအဈကိုမောငျနှမြားနဲ့ မျောဒိုကျကမျးခွေ ကို သှားရောကျလညျခဲ့စဉျက ရိုကျကူးခဲ့တဲ့ အမှတျတရပုံရိပျ လေးတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။ သူမတငျထားတဲ့ ပုံအောကျတှငျလညျး မိနျးကလေးပရိသတျတှကေ ဆှိလေးကို စနောကျ နကွေတာလညျး ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျတှလေညျး ကွညျ့လို့ရအောငျ ပိုငျတံခှနျနဲ့ ဆှိဝတျရညျသောငျးတို့ရဲ့ ပုံလေးတှကေို တဈဆငျ့ ပွနျလညျ ကူးယူတငျဆကျ ပေးလိုကျရပါတယျနျော။
အသက်(၁၀၀)ပြည့်ပေမယ့် ခုချိန်ထိပဲပြုတ်ရောင်းနေရတဲ့ အဘွားကို သွားရောက်ကန်တော့တဲ့ ဒိန်းဒေါင်